Istaraatiijiyad «Toogasho» - xulashooyin degdeg ah, faa&#39;iido dhakhso leh | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyad «Toogasho» - xulashooyin degdeg ah, faa&#39;iido dhakhso leh
Waxaan soo bandhigeynaa istiraatiijiyadda soo socota ee tilmaamayaasha caadiga ah ee falanqaynta farsamada. Waxay keeneysaa faa'iido xasiloon oo ku saabsan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee muddada-gaaban iyo muddada-dhexe ah waana la heli karaa xitaa kuwa cusub.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa saddex tilmaamayaal farsamo.
Oscillator Cajiib ah (AO). Oscillator waa inuu ugu dambeyn xaqiijiyaa calaamadaha tilmaamayaasha hore. Calaamado dheeri ah ayaa lagu heli karaa iyadoo la adeegsanayo heerar dhexdhexaad ah - xaaladdan, Williams Magic Oscillator sidoo kale waxay u shaqeyn doontaa sidii tilmaame xaalado xad dhaaf ah / xad dhaaf ah.
Istaraatijiyad Intraday «Shot» dhigan tahay nidaamka halkii lagu kalsoonaan karo oo scalping ah muxaafidka ah ganacsiga suuqa deggan. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ugu faa'iido badan ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!
Ganacsi otomaatig ah sida ku xusan istaraatijiyadda « Toogasho » waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqa, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa inaad joogto u joogto maalin kasta